China YF2010 Emeputa na Supplier | Yifan
Chekwaa ngwongwo gị n'anya ndị ọbịa gị mgbe ị na-enye ime ụlọ gị ebe obibi mara mma nke ga-eme ka ohere gị ghara ịkpa arụ. Site na tebụl kọfị anyị nwere ike ibuli elu, ihe ịchọ mma ime ụlọ gị agaghị abụ otu. Site na ngalaba nchekwa zoro ezo na shelf ngosi mepere emepe, okpokoro a nwere ya niile. Igosiputa ulo oru ugbo mara mma, okpokoro a abughi nani na ime ka ulo gi di ndu karie kamakwa o na aru otutu oru n'ime ime ihe di mfe.
UFỌ UFỌK: Udia okpokoro nnyịn ọnọ ufọk mme owo emi ẹdiọn̄ọde ke uyai onyụn̄ ememde. Site na nchikota nke ahihia di ocha na nkpuru osisi ohuru, ogwe aka nke mpempe akwukwo a weputara ime ime obodo a site na iji ihe eji eme ihe. Igosipụta agba ndị na-anọpụ iche na ebe nchekwa na-emeghe, tebụl a na-ewetara obi ụtọ ebe obibi ọ bụla.
ADJUSTABLE LIFT TOP: Tebụl anyị na-ebuli elu ma na-aga n'ihu maka oghere ọrụ dị iche iche. Usoro a na - ebuli elu nke na - enye elu zuru oke maka ide, ịgụ ma ọ bụ naanị idozi mmanya na - enye ume. Biko rịba ama na elu a na-ebuli naanị n'ogo kachasị elu. Ọ naghị akwụsị n’etiti ụzọ ghe oghe na nke mmechi.
EGO NA-ECHICHE NA-ECHICHE: Tebụl a na-ebuli elu nke na-enye mmechi a na-achịkwa iji hụ na mkpịsị aka gị agaghị ejide ya mgbe ọ na-emechi.
Mgbakọ a chọrọ: Achọrọ ụfọdụ nzukọ maka tebụl kọfị a. Ihe ntuziaka na ngwa ọrụ niile achọrọ maka mgbakọ a gụnyere.
Ekele site na mbuli-elu imewe, ị nwere ike ngwa ngwa ma jiri nwayọ gbanwee elu elu maka ịgụ ma ọ bụ iri nri. Ebe nchekwa zoro ezo n'okpuru tebụl dị elu na-enyere gị aka idobe ụlọ gị ahazi. Ihe ijuanya na-enye obi ụtọ bụ na ọ na-edozi otu tebụl n'akụkụ, na-agbakwunye nkecha nkecha maka akwụkwọ, ọkwá, ihe ịchọ mma na ihe ndị ọzọ. Na ụkwụ nchara ojii maka ike na nkwụsi ike, okpokoro kọfị a dị n'oge a na-eweta ọmarịcha ịma mma na ime ụlọ ọ bụla.
Nke gara aga: YF2009